Chitima chinomhanya kubva kuLondon ichienda kuParis ndechimwe chinokurumidza kwazvo kuEurope. Inoshanda neEurostar, unogona kuzviwana iwe kubva kuUnited Kingdom kuenda kuFrance mumaawa maviri chete nemaminetsi gumi nematanhatu. Izvo zvinokupa iwe kupfuura inokwana nguva yekurara mauri, kutora chitima, uye kunakidzwa a rwendo rwezuva kuenda kuguta guru reFrance. Tora baguette uye dzunga the Louvre – kana kungonakidzwa nerunako rwese runofanira kupihwa naParis.
Takatotaura nezveRoma, asi Milan rimwe rimwe guta rinoshamisa muItari. Zvakasiyana kubva kumaodzanyemba kweItari semaapuro kune maorenji, Milan igori razvino. Inozivikanwa neyayo yakakwirira-kuguma fashoni uye yepamusoro-tech zviitiko, guta racho rinofanira kumira-nguva chero ipi neipi yeku Italia. Kunyange zvazvo mamiriro ekunze asina kufanana neMediterranean, uchiri kugona kunakidzwa iyo yakanaka yekuvaka uye nyangwe Museum kana maviri chero nguva yegore.
Zvinofanirwa kune chero zororo reEurope, Hamburg, uye Copenhagen anogona kunge asiri ekutanga maguta kusimuka mupfungwa dzako zvekushanya. Zvino nyadzisa, Zvisinei, nekuti maguta ese ari maviri ane mbiri nenhoroondo uye dzinonaka marangi. Hamburg iguta rakakura rechiteshi kuchamhembe kweGerman. Iwe unogona kunge wakambonzwa nezvazvo kare nekuda kwekubatana kwayo ne chikafu chinoshamisa chakakurumbira hamburger. Fun chokwadi – vanhu vanogara muHamburg vanonziwo maHamburger.